Barcelona Oo Heer Ay Adagtahay In Tababare Loo Gaadho U Gaadhay Ronald Koeman & Doorka Aan La Rumaysan Karin Ee La Siiyay - Gool24.Net
Barcelona Oo Heer Ay Adagtahay In Tababare Loo Gaadho U Gaadhay Ronald Koeman & Doorka Aan La Rumaysan Karin Ee La Siiyay
Kooxda Barcelona ayaa heer cajiib ah u gaadhay tababaraha cusub ee kooxdeeda ee Ronald Koeman kaas oo dhawaan jagada sarre ee Camp Nou la wareegay kaddib markii la caydhiyay Quique Setien oo mudo kooban ku fashilmay.
Tababarihii hore ee Everton iyo Southampton ayaa toddobaadkii hore loogu dhawaaqay inuu yahay tababaraha Barcelona xilli uu shaqada waayay Setien oo ay galaafatay guuldarradii foosha xumayd ee ay kaga hadheen Champions League.
Sida uu hadda sheegayo wargeyska Sport, Koeman ayaa hadda ay Barcelona siinaysaa kalsooni cajiib ah iyagoo xoriyad u siinaya inuu lasoo saxeexdo xiddigaha uu isagu shaqsiyan doonayo si uu dib ugu dhiso kooxda.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in madaxweynaha kooxdaas ee Josep Maria Bartomeu uu awood-buuxda siinayo Koeman oo uu tababaraha ree Netherlands noqon doono shaqsiga isagu go’aamiya cida baxaysa iyo cida imanaysa.
Sport ayaa sheegaya in Koeman uu kaliya la saxeexan doono xiddigaha uu u arko kuwa muhiimka u ah taatikada uu doonayo inuu Camp Nou ka hirgeliyo halka ciyaaryahanada hadda kooxda jooga ee uu doonayo aan laga iibin doonin.
Qaar kamida xiddigaha Barcelona ayaa wajahaya hubaanti la’aan dhinaca mustaqbalkooda ah, ciyaaryahanadaas ayuu ku jiraa kabtanka kooxda ee Lionel Messi oo lala xidhiidhinayo inuu ka dhaqaajin doono Camp Nou.
33 sano jirka ree Argentina ayaa soo gaabiyay fasaxiisa xagaaga si uu ula kulmo tababare Koeman balse ka cadhooday kaddib markii wixii ay shirkaas ku wada hadleen banaanka u baxay oo uu gaadhay saxaafada.